ဆောင်းပါးများ | Danya Wadi
By danyawadi February 18, 2020 Leaveacomment
ICOE ၏ ရခိုင်အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်ပါ အဓိကအချက် များ by ARAKAN TIME on February 18, 2020 in Articles, Myanmar News ဧရာဝတီ By ကျော်ဖြိုးသာ 17 February 2020 မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစည်းရိုးအနီး နယ်ခြားစောင့်ရဲများ ကင်းလှည့်နေစဉ် / ဧရာဝတီ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော အစီရင်ခံစာကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ထံသို့ တင်ပြခဲ့သော် လည်း မြန်မာအစိုးရ၏ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (ICOE) သည် အစီရင်ခံစာ အပြည်အစုံကို ယခုအချိန်အထိ အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါ။ […]
By danyawadi February 13, 2020 Leaveacomment
7DAY DAILY အယ်ဒီတာ့အာဘော် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ)က မြန်မာ အပေါ် ကြားဖြတ် အစီအ မံလေးချက်လိုက်နာရန် နှစ်ပတ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မြန်မာက လိုက်နာမည်၊ မလိုက်နာမည်ကို ယနေ့အထိ တရားဝင်ဖြေကြားခြင်းမရှိ သေးပေ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၇ သြဂုတ်ကစ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ (ရိုဟင်ဂျာ) ဘင်္ဂါလီပေါင်းသိန်းနှင့်ချီ၍ ထွက်ပြေး အောင် ဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဆိုကာ အိုအိုင်စီနိုင်ငံများနောက်ခံဖြင့် ဂမ်ဘီယာ က ICJ တွင် တရားစွဲထားသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ )ခြောက်သိန်းကျော်အတွက် ဂျီနိုဆိုက်ထပ်မံမကျူး လွန်နိုင်ရန် ဆိုကာ ကြားဖြတ်အစီ အမံ (Provisional Measures) ခြောက်ချက်ကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တောင်း ဆိုခဲ့သည်။ ICJ တွင် ဂျီနိုဆိုက်စွပ်စွဲချက်ဖြင့် […]
တရုတ်-မြန်မာ သဘောတူညီချက် (၃၃)ချက် မှာ ဘာတွေ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲ
By danyawadi January 22, 2020 Leaveacomment
တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြား ကျောက်ဖြူစီမံကိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအပါအဝင် သဘောတူညီချက် ၃၃ခုကို ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထားခဲ့ပြီး ယင်း(၃၃)ခုထဲတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် (၆)ခုမှာ လုပ်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းများကို သပ်သပ်ထုတ်နုတ်ဖော်ပြမည့်အပြင် မြေပုံပေါ်တွင်လည်း The Voice Journal က ပုံကြမ်းဆွဲထားခြင်းကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မည်သည့်နေရာများတွင် မည်သည့်စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်မည်နည်းကို အကြမ်းဖျင်းကြည့်သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကမြို့ကြီးများဖြစ်သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဧရာဝတီနှင့် ကချင်ပြည်နယ်များတွင် လုပ်ဆောင်မည့် သဘောတူညီချက်များ၊ စီမံကိန်းများ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထူးခြားချက်မှာ နေပြည်တော်နှင့် ကျောက်ဖြူကို လမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အစီရင်ခံစာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ စာလွှာပါ။ တချိန်ချိန်မှာ လမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စပါ။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် (၆)ခုတွင် လုပ်ဆာင်မည့်ကိစ္စရပ်များထဲမှ ထူးခြားချက်များကိုလည်း ထုတ်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။ […]
By danyawadi January 9, 2020 Leaveacomment
The great shah abbas …. အီရန်​ဝန်​ကြီးချုပ်​မိုဆာဒက်​ အင်္ဂလိပ်​တို့ကို​မောင်းထုတ်​သူ မိုဟာမက်​​ရေဇာရှားပါလဗီ ရုပ်​​သေးဘုရင်​ အီရန်-အမေရိကန်ကမ္ဘာရန်သူကြီးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ။အီရန်အာဏာသိမ်းပွဲ။ သမိုင်းနောက်ခံ – အီရန်သည်တစ်ချိန်က ‘အပ်စ်ဖာဟန်’ နေပြည်တော်မင်းနိူင်ငံခေတ်ကာလကခေတ်မှီ၍ သိပံ္ပပညာထွန်းကားခဲ့သောနိူင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ကာလမှာအားဖြစ် AD1587မှ 1629ထိဖြစ်သည်။ပါရှားမင်းကြီးမှာမူ ‘ရှားအဗ္ဗားစ်’ ဖြစ်သည်။သူသည်သူ့ဖခင်အားစစ်အာဏာသိမ်း၍သူ၏မိခင်နှင့် ညီအကိုများကိုသတ်ခဲ့သော စစ်ခေါင်းဆောင်များကိုသေဒဏ်စီရင်ခဲ့သည်။သူသည်ပါရှားစစ်တပ်ကိုစစ်သည်အရေအတွက်များခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအမြောက်၊သေနတ်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အပြင်အာဖရိကလူမည်းများကိုပါစစ်မူထမ်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။ထို့ပြင်အော်တိုမန်တူရကီတို့နှင့်စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေရခြင်းကိုအဆုံးသက်ရန်ဥရောပနိူင်ငံများနှင့်အကောက်ခွန်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမူရယူကာစွန်နီ၊ခရစ်ယာန်၊ဂျူးများကိုပါသူ၏ ‘အပ်စ်ဖာဟန်’ မြို့တော်တွင်လာရောက်ပညာသင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။သူသည်သက်တော် 42 ကြာစိုးစံ၍ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ပါရှားမင်းကြီး ‘ရှားအဗ္ဗားစ်’ ၏အားနည်းချက်မှာပြစ်မူ ကျူးပါကခွင့်မလွှတ် တက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တူရကီတို့နှင့်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲတွင်သူ၏သားတော်များပြစ်မူကျူးလွန်ခဲ့ကြသည့်အတွက်သေဒဏ်အပြစ်ပေးခဲ့သည်။သူနောက်တပ်လာသောမင်းများသည်အရည်အချင်းမရှိကြပေ။ထို့ကြောင့်ပါရှား ‘ဆဗားဗစ်’ အင်ပါယာသည်အော်တိုမန်တူရကီတို့ကိုရင်ဆိုင်ရန်​ကြီးမားသောစစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏အကျင့်ပျက်အာဏာလုမူကြောင့်တိုင်းပြည်ပျက်ရသည်။တူရကီလက်အောက်သို့ရောက်သွားခဲ့သည်။ အီရန်ကိုအိမ်နီချင်းနိူင်ငံဖြစ်သည့်အာဖဂန်မင်းမာမွတ်ဂါဇနီသည် AD1722 တီဟီရန်မြို့တော်ထိဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်၍ရွှေငွေတို့ကိုလုရက်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန်အီရန်တွင် ‘နိုင်ဒါရှား’ ပေါ်လာ၍အာဖဂန်တို့ကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိူင်ခဲ့သည်။သို့သော် AD 1747 တွင် ‘နိုင်ဒါရှား’ လုပ်ကြံခံရပြီးတူရကီအနွယ်ဝင် ‘ကွာဂျာ’ မင်းများသည် 1925 ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ပရမ်းပတာဖြစ်နေသောအီရန်ကိုစုစည်းရန် ‘ရေဇာရှား’ ပေါ်ပေါက်လာသည်။’ရေဇာရှား’ ဟာရုရှားဇာဘုရင်ဖွဲ့စည်းပေးထားအီရန်၏တစ်ခုတည်းသောစစ်တပ်ဖြစ်သည်ကော့ဆပ်စစ်တပ်တွင်အမူထမ်းခဲ့ရမှ […]
ဧရာဝတီ ကျော်ဖြိုးသာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် လျှောက်လဲချက်ပေးနေသည့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်/ / နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ) ခန်းမဆောင်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးပါသည့် တရားသူကြီး အဖွဲ့ရှေ့မှောက် ၌ ကြားနာမှုကို တက်ရောက်ခဲ့သည့်အချိန် နိုင်ငံတကာမီဒီယာ၏ အာရုံစိုက်မှုသည် သူမ အပေါ်တွင်သာ ရှိနေခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေ မွတ်ဆလင်များအား မြန်မာနိုင်ငံက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည် ဆိုသော ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်က စွပ်စွဲမှုကို […]
MoeMaKa ဇင်လင်း – (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၀ ၂၀၁၉ ခုကုန်ဆုံး၍ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၏ စာမျက်နှာအသစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ။ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ၇၂ နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီ။ လက်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသက်တမ်း လေးနှစ်ပြည့်တော့မည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက် ပွဲ ကျင်းပရန် ဆယ့်တစ်လခန့်သာ လိုတော့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်သည် မြန်မာ နိုင်ငံအား ပြည်တွင်းစစ်၏ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များဖြင့် အကျည်းတန်စွာ ချန်ထားရစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခု တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဒေသတွင် တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တို့၏ စစ်ပွဲများကြောင့် မြေစာပင် ရခိုင်ပြည်သူများ အတိ ဒုက္ခကြီးစွာ ရောက်ကြရ သည်။ […]
မြန်မာ့အလင်း အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတစ်ဦး သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းဆိုတာ အတူတူ ပဲလို့ လူအတော်များများက ထင်မှတ်မှားနေကြ ပါသည်။ အရပ်ထဲမှာတော့ လူတွေက သန်းခေါင်စာရင်းခေါ်လိုက်၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းလို့ ခေါ်လိုက်နှင့် ရောထွေးနေကြပါ သည်။ အိမ်ထောင်စုစာရင်းလို့ခေါ်တဲ့သူ အတော်နည်း ပါသည်။ ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘ၀တွင်ရှိစဉ်က ဌာနဆိုင်ရာ အချင်းချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုအရ အကူအညီ တောင်းကြသူတွေ အားလုံးနီးပါးက သန်းခေါင်စာရင်း လို့ပဲ လွယ်လင့်တကူခေါ်ကြတာ တွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သည့်အခါ ဌာနဆိုင်ရာအစည်း အဝေးတွေမှာ ဒီဝေါဟာရနှစ်ခု မတူကွဲပြားပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အလျဉ်းသင့်သလို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။ ဟိုတစ်လောကတောင် သတင်းစာ တစ်စောင်မှာပါသည့် အလုပ်ကြော်ငြာစာထဲမှာ သန်းခေါင်စာရင်းဆိုပြီး တွေ့လိုက်ရသေးသည်။ ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းမပြမီ ဝန်ဆောင်မှုပေး နေသည့် ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပေါ်လာပုံကို တင်ပြမှသာ ပိုမိုပြည့်စုံမှာမို့ အကျဉ်းမျှ တင်ပြပါရစေ။ မြန်မာ့နယ်နိမိတ် […]
By danyawadi January 3, 2020 Leaveacomment